Echela ya! Mkpụrụ Semalt Na-enye Ahụhụ SEO I Kwesịrị Ịgba Afọ a
SEO bụ otu n'ime usoro ma ọ bụ atụmatụ siri ike ma sie ike iji mee ka ntanetị nke weebụsaịtị gị na ịntanetị. E nwere ihe ụfọdụ, ụzọ, na echiche ị kwesịrị ilekọta. Otu okwu nke nwere ike ịkọwa search engine njikarịcha bụ "experimentation." Ọ bụ iwu na ị ga-anwale mkpụrụ okwu ole na ole na nnwale na usoro na usoro ọhụrụ iji nweta ihe ịga nke ọma na ịntanetị.
Jason Adler, Njikwa Ihe Nlekọta Ndị Ahịa nke Semalt , atụlewo ebe a ụfọdụ n'ime ọrụ SEO ị ga-anwale n'afọ a.
Ka m gwa gị na nyocha niile bụ ntọala nke njikarịcha search engine na nkwa na ị ga-ebugharị okporo ụzọ gị na ibe weebụ - check keyword position. Na-enweghị SEO nwere, ọ gaghị ekwe omume na onye ọ bụla na-eweta revolutions na World Wide Web.
Nlereanya 1: Ọdịnaya Nri
Ndị ọkachamara SEO niile maara na ọdịnaya bụ eze. Enweghị obi abụọ na ya n'ihi na, n'enweghị mma ọdịnaya, saịtị gị enweghị ike ịnọdụ na ịntanetị. N'ụzọ dị mwute, ndị dị iche iche na-ahọrọ ịmegharị ọdịnaya iji chekwaa oge na mgbalị ha..Usoro a agaghi enye gi ihe choro. Ọ bụ ya mere ị kwesịrị iji mepụta ọdịnaya dị mma ma jiri ọtụtụ okwu dị mkpa dị na isiokwu gị. Ndị mmadụ dị iche iche kwenyere na nke a pụtara ịmepụta ọtụtụ isiokwu kwa ụbọchị. N'ezie, ọ pụtara na ị dee otu isiokwu kwa ụbọchị na nke ahụ kwesịrị ịbụ àgwà kachasị elu. Ụlọ ọrụ na-arụsi ọrụ ike inweta akwụkwọ ha dere site n'aka ndị edemede kachasị elu site n'akụkụ nile nke ụwa. Ha na-akwụ ndị edemede ha ụgwọ ma nye ha nnukwu ọrụ. I kwesiri ibu nani ihe ederede bu okwu oma kamakwa igosi uzo ozo na nkebi ahịrịokwu iji nweta akwukwo ndi ozo n'oru nyocha. Google na-enyocha niile nke ibe weebụ nke dabeere na njirimara ọdịnaya na ikike ngalaba gị dum. Ọ bụrụ na ị mepụtara ọtụtụ nke ibe, ọ dị mkpa ka ha depụta ha na ederede ederede ma ọ bụ ọdịnaya weebụ.
Nlereanya 2: Nwepụta njirimara ọkachamara
Ahụmịhe ndị ọkachamara na-adịkarị mkpa n'agbanyeghị akụkụ nke ụwa ị bi. Were ya dị ka ihe ga-eme ka ị nwee ihe ịga nke ọma ma mee ka ndị ọbịa gị nwee ahụmahụ mara mma. Jikọta usoro dị iche iche n'ime SEO gị ka ọ bụrụ njedebe na-adịghị agwụ agwụ ka ọtụtụ ndị na-egosi mmasị na ibe weebụ gị. Ọ gaghị adị njọ ịsị na agbanweela algọridim Google na azum na ọnwa ndị na-adịbeghị anya. Ya mere, ị ghaghị ịmatakwu nke ọma ihe engines na-achọ na otu esi eweta ezigbo ahụmahụ maka ndị ọrụ gị n'ime ebe nrụọrụ weebụ. Ka ị na-aghọtakwu echiche nke ndị ọbịa gị, ọ ka mma ị ga-enwe ike imeziwanye ma jikọta ma ndị nleta na search engines karịsịa Google.
Nlereanya 3: Ịkwado njikọta n'ime ụlọ
Onye ọkachamara SEO maara mkpa ọ dị ilekwasị anya na njikọ ndị ọzọ na nke dị n'ime. Ịkwado njikọ gị dị n'ime ya dị oke mkpa. Ejighị isiokwu ma ọ bụ ederede arịlịka na-ekwesịghị ekwesị dị mkpa iji nweta njikọ dịgasị iche iche n'isiokwu gị. Kama nke ahụ, ị ​​ga-eburu isiokwu dịgasị iche iche ma jide n'aka na ekwesighi imebi àgwà ọ bụla. Jikọọ ibe weebụ ndị dị mkpa na ibe gị ma nweta ezi ihe n'ime izu ole na ole.